Nayakhabar.com: नेपालका घुम्नलायक १० हिमाली क्षेत्रहरु (फोटोफिचरसहित)
नेपालका घुम्नलायक १० हिमाली क्षेत्रहरु (फोटोफिचरसहित)
नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो । चिन र भारतको बीचमा रहेको सानो अनि भुपरिबेष्ठित मुलुक नेपाल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट स्थल हो । यहाँका सांस्कृतिक विविधता तथा भौगोलिक विविधताले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । संसारभर पाइने सबै किसिमको हावापानी पाइने तथा पुरातात्विक राउटे जाती देखि लिएर आधुनिक मानवसम्मको वसोवास रहेकाले मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि समेत नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा, तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा लगायत विश्व सम्पदा सूचीमा परेका १० स्थल रहेको नेपालमा विभिन्न उद्देश्य लिएर पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । नेपालमा घुमफिरका लागि उत्कृष्ट स्थलहरु थुप्रै छन् । नेपालका हरेक कुनाकाप्चाले आआफ्नै विशेषता बोकेका छन् । तीमध्ये, केही उचाईमा रहेका तथा विशिष्ट विशेषता बोकेका नेपालका उत्कृष्ट १० स्थलहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
समुन्द्री सतहबाट ५ हजार मिटरको उचाईमा रहेको तिलचो ताल संसारकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो । अन्नपूर्ण हिमश्रींखलाको काखमा रहेको यो ताल नेपालको हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा पर्दछ ।
अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (एबीसी)
लहलह झुलिरहेका धानका वालासँगै ढकमक्क फुलेका लालीगुराँसका वास्ना लिँदै अन्नपूर्ण वेस क्याम्प घुम्नुको मज्जा नै छुट्टै छ । ट्रेकिङ जानका लागि उत्कृष्ट तथा अनुकुल यस क्याम्प ७ हजारदेखि ८ हजार मिटर उचाईमा रहेको छ । यहाँको ट्रेकिङ ट्रिप ७ देखि ११ दिन लामो हुन्छ ।
नेपालको हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भेग ट्रेकिङका लागि प्रसिद्ध छ । बुद्ध धमर्मावलम्बीहरुको वाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा थुप्रै गुम्बाहरु रहेका छन् । यो क्षेत्रमा कुनै समयमा तिब्बती शासकहरुले राज गरेको भन्ने बथन रहिआएको छ । त्यसैले यहाँको रहनसहन तथा वातावरण तिब्बतसँग मिल्दोजुल्दो पाउन सकिन्छ । चट्टानै चट्टानले घेरिएको यस स्थानको बनावट एकदमै अनौठो छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था, रहनसहन लगायतो अवलोकनका लागि माथिल्लो मुस्ताङ भिजिट गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो जुन समुन्द्री सतहबाट २९ सय ९० मिटरको उचाईमा अवस्थित छ भने १०.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा यो ताल फैलिएको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले यस ताललाई चारैतिरबाट घेरेको छ । नेपालको पश्चिमी भेगमा ट्रेक जाने सोचिरहनुभएको छ भने यस स्थानमा जानु उचित हुन्छ ।
नेपालको सुदुरपश्चिममाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना वि.सं. १९८४ मा भएको थियो । बझाङ, बाजुरा, अघाम र डोटी चारवटै जिल्लाको कुल २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यस निकुञ्ज फौलिएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न खहरेहरुका साथै जंगलहरु छन् । नेपालभरिकै सबैभन्दा आकर्षक दृश्य भएको स्थानका रुपमा यस क्षेत्रलाई लिइन्छ ।
जुगल हिमालको काखमा अवस्थित पाँच पोखरीको धार्मिक महत्व रहेको छ । पाँच पोखरी ट्रेक १२ दिनको हुन्छ । यस ट्रेकमा जाँदा हिमाली दृश्यका साथै, धार्मिक विविधता तथा भौगोलिम विविधताको अवलोकन गर्दा स्वर्गीय अनुभूति हुन्छ ।
नेपालको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको गोसाइकुण्ड ताल समुन्द्री सतहबट ४३ सय ८० को उचाइमा छ । रसुवा जिल्लामा रहेको यस ताल रहेको क्षेत्रलाई हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन् । विभिन्न हिमाली दृश्यले घेरिएको यस स्थानमा ट्रेकिङ जानु निकै एडेभेन्चरस हुन्छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वि.सं. १९७३ सालमा स्थापना भएको हो । शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर सुरुमा नामाकरण गरिएको यस क्षेत्रलाई राजतन्त्रको अन्त्यसँगै भितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनि नामाकरण गरियो । वि.सं. १९८४ मा यस निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भयो । ९ सय ३२ वर्गाकिलोमिटर क्षेत्र ओगटेर रहेको यस क्षेत्र नेपालको पर्सा जिल्लामा अवस्थित छ । विशेषतः हात्ती सवारीका लागि यस क्षेत्र प्रमुख मानिन्छ ।
पुन हिल अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलामा पर्छ जहाँबाट देखिने दृश्य अकल्पनिय छ । घोरेपानी तथा पुनहिल ट्रेकिङ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सुरु भएर पोखरामा अन्त्य हुन्छ । विभिन्न उपत्यका र जंगल हुँदै जाने यस ट्रेकिङका क्रममा साह्रै रोमाञ्चक दृश्याअवलोकन गर्न सकिन्छ ।
संसारकै अग्लो हिमाल सगरमाथाको काखमा अवस्थित एभरेष्ट बेस क्याम्प ट्रेकिङका लागि देशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने गर्दछ । १६ दिनको यस ट्रेकिङका क्रममा ढकमक्क फुलेका लालीगुराँसका साथै ढुंगाको छाना भएका शेर्पा वस्ती, नाम्चे बजार लगायतका उत्कृष्ट दृश्यावलोकनले स्वर्गीय अनुभूति प्रदान गर्दछ । समुन्द्री सतहदेखि ५ हजार ३ सय ६४ मिटरको उचाईमा एभरेष्ट बेस क्याम्प रहेको छ ।